Ngenisa idatha kunye neebheringi kunye nomgama kwiMicrostation -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Faka idatha ngeenkcukacha kunye nemida kwi-Microstation
Ndifumana umbuzo olandelayo:
Molo Zibuliso, ndingathanda ukwazi ukuba uzoba njani ipoligoni ukusuka kumkhombandlela kunye nokuhamba imigama kwi-MicroStation, kwaye ukuba ungayisebenzisa i-Excel Sheet oyilungiselele i-AutoCad
Ewe, kwisithuba esidlulileyo sichaze indlela yokwenza ngayo nge-AutoCAD kunye neetafile ze-Excel eziququzelela ukuba zingeniswe kwi-Excel kwaye zikopishwe kuphela kwi-AutoCAD.
Kwimeko yeMicrostation, imeko yahlukile. Kule meko ndiza kuchaza ukuba ungangena njani unqumleza usebenzisa iibheringi kunye nomgama;
1 Ifomathi yeeyunithi zee-angular
Ngokuzenzekelayo kuza ii-angles zedolophu ezisuka empuma, kodwa ukuba eyona nto siyifunayo kukungena kwi-polygon efana nale kuboniswe kumzobo
Ukuchaza ifomati ye-angular, kufuneka sikwenze
izicwangciso / ifayile yokuyila / ukulungelelanisa ukufunda
Kwaye apha kwicandelo "leengile" usete ifomathi "Yokuthwala", kunye neefomathi zefomathi, imizuzu, imizuzwana (DD MM SS). Ke kulungile. Lumka, ezi iipropathi zomzobo, hayi ukumiselwa kweMicrostation ngokubanzi.
2 Susa ukhetho "Gcina i-engile yokugqibela"
Esi yimpazamo eqhelekileyo, kwaye ukuba ayiqwalaswanga xa kusenziwa umgca, inkqubo ithathela ingqalelo umgca wokugqibela njenge-engile yesiseko, ngokungathi siza kusebenza kwi-deflections kwaye iyimfuneko ukuseta kwakhona icandelo ngalinye lomgca iqhosha elifanelekileyo .
Ukuthintela ingxaki, xa uvula umgca wokuyalela, kufuneka ususe ukhetho "Jikelezisa i-AccuDraw kumacandelo" njengoko kubonakala kumzobo olandelayo.
3 Qalisa i-AccuDraw
Nje ukuba uqale ukufaka imigca, xa ubeka inqaku lokuqala indawo ethi "Beka imigca emnandi" iyavela, ukuvula ipaneli ye "AccuDraw", cinezela iqhosha elithi "Toggle AccuDraw", ukuba akukho ukufumaneka kusebenze ngokucofa ekunene kwindawo leyo kwaye ukhethe ukhetho oza kulubonisa.
Njengoko ubona, kubonakala iphaneli yokufaka umgama kunye ne-engile kwifomathi "Yokubekwa". Nje ukuba idatha ifakiwe, kufuneka ifakwe, njalo-njalo de ibe kugqitywa ipoligoni.
3 Shintsha phakathi kweRectangular kunye nePolar
Ukutshintsha phakathi kolu khetho kunye nokulungelelanisa iXY, kusetyenziswe oonobumba abakhulu:
Kuthetha ukuba ukwenza iAccuDraw isebenze, ucofa indawo eluhlaza kwaye ucinezela naziphi na izitshixo ze "X" okanye "Y", ngokukhawuleza iphaneli litshintshe ukuze lingene kulungelelaniso.
Ukudlula kumgama, cinezela nayiphi na yezitshixo zika "A" okanye "D".
Andicingi ukuba kunzima kakhulu, kufuneka wenze itafile ngokugqithileyo eguqula isakhelo sezikhombisi kunye nomgama kumnxibelelanisi we-xy, emva koko ingeniswe kunye neMicrostation njengefayile ye-txt ... kwisithuba esilandelayo siya kuthi.
Incwadana ye-Manifold yokusetyenziswa komasipala ikulungele
Enkosi Geofumadas, ngale ngcaciso indinceda kakhulu emsebenzini wam, ungoyena ufanelekileyo kwaye ndifuna ukuba eli phepha lihlale lihlaziywa kakuhle …… enkosi
Ngenisa imifanekiso ye-3D kunye nomzekelo ukusuka kwiGoogle Earth